Tsenan'ny tsenan'ny tsenan'i China Malaysia 2020 Ny Orinasa sy ny orinasa | Serivisy fampirantiana fampiratiana tany Shanghai
Malaysia dia iray amin'ireo firenena be mpampiasa indrindra any Azia Atsimo Atsinanana ho an'ny mpampiasa vola trano. Eto, manana fahazoana karazana fananana ianao ary afaka mividy tany ianao satria vahiny.
Rehefa nilaza izany ianao, raha mikasa ny hividy trano any Malezia ianao dia tsy maintsy mahatakatra ny fomba mahasalama ny tsena sy ny manantena amin'ny taona ho avy.
Ao amin'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko ny doka ho an'ny tsenan'ny fananan'i Malaysia amin'ny taona 2020, miorina amin'ny antontam-piainana ankehitriny sy ny angon-drakitra ara-tantara. Voalohany, hanomboka hanazava ny fomba nanatontosana ny tsena tato anatin'ny taona vitsivitsy izay aho.
Tamin'ny taona 2017, nitombo 5% ny salan'isa, ny taha ambany indrindra hatramin'ny taona 2009. Nahita fironana mitovy amin'ny isan'ny fifanakalozana izahay, ary 311 824 tamin'ny fitaterana tamin'ny taona 2017 ihany no haino aman-jery hatramin'ny taona 2012.
Ity ambany ity dia afaka mahita fampitahana isan-taona avy amin'ny departemantan'ny Valuation sy fananana ao Malezia, mampiseho ny fiovana isan-taona amin'ny vidin'ny trano manomboka amin'ny 2012 - Q2 2019.
Ny mijery ny taona 2017 sy ny tapany voalohany tamin'ny taona 2018, Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, ary Sabah dia nahitana valiny tsara kokoa miaraka amin'ny vidiny sisa tavela na manodidina ny salan'isa nasionaly.
Ny tanàna toa an'i Pahang, Perak, ary Terengganu, amin'ny lafiny iray, niaina faran'izay tsara ny fiakaran'ny vidim-pirenena.
Tamin'ny ampahefatra fahefatra tamin'ny taona 2018 dia nitombo be ny Sabah sy Johor ary misy 7,7% ary 6,2%. Kuala Lumpur dia nandrakitra ny fihenan'ny indeksan'ny vidin'ny trano nandritra ny ampahefatry ny taona 2018 sy ny tapany voalohany tamin'ny taona 2019.
Vidiny namboarina ho fitrandrahana
Tiako ny manonona ihany koa fa ny fisondrotry ny vidiny etsy ambony dia tsy zakan'ny fisondrotana.
Raha manitsy ny vidin'ny fiakaran'ny vidim-piainana isika, dia nihena ny vidin'ny fananana tamin'ny toerana maro nandritra ny taona 2017, 2018 sy 2019, anisan'izany ny Kuala Lumpur, Selangor, ary Penang.
Araka ny tatitra navoakan'i Edmund Tie & Company dia nahita ny fiakaran'ny vidim-bidy avo lenta hatramin'ny telopolo taona tany Kuala Lumpur nandritra ny ampahefatry ny taona 2018. Ny volany, etsy ankilany, nidina -6,3%.
Ny Ivom-baovao momba ny fananana momba ny fananana dia namerina izany fanambarana izany, nilaza fa Kuala Lumpur dia nahita fiakaran'ny vidin'ny trano isan-taona 1.7%. Raha manitsy ny fisondrotam-bidim-piainana isika, dia misy aza ny fitomboana ratsy.
Ny isan'ireo fifanakalozana, ary koa ny lanjan'ny fifanakalozana, dia nihena tamin'ny tapany voalohany 2018 ho an'ny sehatry ny trano fonenana, raha oharina tamin'ny taon-dasa.
Ny sehatry ny varotra sy indostrialy dia naneho valiny tsara kokoa miaraka amin'ny fitomboan'ny isan'ny fifanakalozana sy ny sandan'ny fifanakalozana.
Naneho valiny tsara kokoa noho ny nantenaina ny taona 2019 ary nidina ny tsenan'ny trano fonenana.
Tanànan'ny ankamaroany lafo indrindra hividy fananana any Malaysia
I Kuala Lumpur dia nijanona ho toerana lafo vidy indrindra hividianana trano nandritra ny roa taona lasa. Tsy mahagaga raha renivohitra izy io, toerana ara-bola, ary tanàna malaza indrindra amin'ireo mpizahatany sy mpizahatany.
Tamin'ny faran'ny Q4 2019, ny vidin'ny trano antonony dia RM 980,564, izay somary avo be raha ampitahaina amin'ny salan'isa nasionaly. Eto ambany ianao dia afaka mahita fampitaha ny vidiny amin'ny fanjakana samy hafa mandritra ny Q4 2019:
Pulau Pinang: RM 437,632
Toerana mora indrindra hividianana fananana any Malaysia
Raha mitady trano mora, Kelantan, Melaka, ary Perlis no ho safidinao voalohany amin'ny vidin'ny trano mitentina RM 200,000 (USD 48,200). Latsaky ny antsasaky ny salan'isa nasionaly izany.
Tsara homarihina fa ny fisondrotry ny vidiny dia ambany amin'ny toerana misy trano mora vidy. Ity ambany ity dia nanao lisitra ireo tanàna hafa manana fananana mora vidy indrindra any Malezia:
Market Market ho an'ny 2020
Mihevitra ny mpandinika fa hijanona tsy hatanjaka ny tsena amin'ny 2020, na dia betsaka aza ny fananana. Ny governemanta dia hampiditra politika maromaro mahasoa amin'ny mpividy eo an-toerana sy vahiny.
Ireto ambany ireto dia notanisaiko ny antony lehibe indrindra mahatonga ny tsena mety hitoetra ao amin'ny 2020.
Ny fangatahana fampindram-bola farany ambany indrindra
Mba hiatrehana ny fisian'ireo trano sy condominiums tsy voatanisa (mitentina 8,3 miliara dolara amin'ny Q2 2019), ny fampihenan'ny famatsiam-bola kely indrindra dia ahena avy amin'ny 1 tapitrisa dolara ka hatrany amin'ny 60000000 any an-tanàn-dehibe ao amin'ny 2020.
Manangana Tetikasa Kely ny Mpampivelatra
Niady tamin'ny fananam-pananana tafahoatra i Malezia, fa ny fitsipi-pifehezana tamin'ny taona 2018 dia toa nahatratra ny famatsiana be loatra.
Ankoatr'izay, marobe ny mpamorona no nanamboatra condominium lafo be loatra izay tsy takatry ny mpividy Malezianina.
Rehefa nilaza an'izany izy dia hahita ny fivoaran'ny vondron'olona mora indrindra amin'ny 2020, izay natokana ho an'ny mponina eo an-toerana.
Fampidirana fandaharana ho an'ny fananana trano-trano (RTO)
Miaraka amin'ny fanohanana ny programa manofa-trano-trano (RTO) sy hiantoka ny vidin'ny findramam-bola, dia hanampy amin'ny fampitomboana ny tsena ny governemanta. Ity programa ity dia mety ho an'ireo mpividy voalohany izay manana olana handoa ny fidiram-bola voalohany amin'ny 10%.
Miaraka amin'ny fitsipika fampindramam-trosa dia araravina ny programa RTO fa misy fiantraikany tsara amin'ny tsena.
Hetra alaina amin'ny fananana trano vaovao (RPGT) nohavaozina
Amin'ny alàlan'ny fanovana ny taona fototra hatramin'ny 2000 ka hatramin'ny 2013, ny mpivarotra dia handoa RPGT ambany kokoa izay vinavinaina hampiakatra ny hetsika amin'ny tsenan'ny fananana sekely faharoa.
Zava-dehibe tokoa ity ny fitaomana ny mpividy hanavao sy hitady trano vaovao.
Fikarohana ara-toekarena ao Malaysia ho an'ny 2020
Ny toe-karena any Malezia dia voalaza fa hitombo amin'ny 4.8% amin'ny 2020, tafakatra 4.7% amin'ny 2019. Aza manantena hahita fihenan-kevitra amin'ny lafiny fitomboana ara-toekarena.
Fiatrehana ny Oversupply sy Overhang tamin'ny 2020
Nanao dingana maromaro ny governemanta Maleziana hamahana ny olana amin'ireo olana tafahoatra ny fananana trano. Tamin'ny volana Novambra 2017, nanapa-kevitra ny governemanta ny hametraka fandraràna vetivety amin'ny fananganana condominium avo lenta mihoatra ny 1 tapitrisa dolara (manodidina ny USD 245,000).
Araka ny angon-drakitra navoakan'ny Ivotoerana momba ny fananana nasionaly, ny taham-bolan'ny trano fonenana dia nidina 20% ho an'ny tetikasa vita ary 37% ho an'ny tetikasa vao vita nandritra ny tapany voalohany amin'ny taona 2018, raha oharina tamin'ny taona 2017. Izany dia famantarana tsara.
Tamin'ny volana Janoary 2018, dia nametraka fepetra vaovao indray ny governemanta ary nampitombo ny adiresy hajia amin'ny 3% ka hatramin'ny 4% fananana mihoatra ny 1 tapitrisa dolara. Izany dia nanosika ireo mpamatsy vola sy mpividy hitady trano mora vidy kokoa, vidiny ambany RM 1 tapitrisa.
Ny fitsipika vaovao ihany koa dia natolony ireo mpividy tanora kokoa, izay mpividy matetika. Ny governemanta Maleziana taloha dia nampiditra fitsipika vaovao hafa, ohatra, ny volavolan-dalàna momba ny volan'ny vahoaka ao amin'ny taona 2011 (PR1MA), natao mba hanamora ny tanora amin'ny fividianana trano mety.
Raha ny voalaza, dia nahita fihenam-bidy farany amin'ireo vatan-kavoana avo lenta amin'ny taona 2018 sy 2019 izahay, saingy miaraka amin'ny politika vaovao no misy, ireo mpikaroka dia mino fa ny tranobe dia hitantana tsara ny taona 2020.
Previous: Philippines Market Market Market amin'ny 2020
Fampisehoana fifindra-monina any Malezia
Fampisehoana fananana any Lusxury ao Malezia
Fandaharana trano any Malezia